|| सज्जन पेसमा अनुसन्धान कागजको लागि भुक्तान गर्नुहोस्
पेशेवर लेखन मद्दत चाहिन्छ? एक उच्च-गुणवत्ताको कागज प्राप्त गर्नुहोस् सर्वश्रेष्ठ पे भुक्तानी पेपरका लागि सबै शैक्षिक मापदण्डहरु लाई लेखिएको।
अनुसन्धान कागजातहरूका लागि भुक्तानको बारेमा तपाईंलाई के जान्नु आवश्यक छ
यदि तपाइँ अनुसन्धान कागजको लागि भुक्तानीको क्रममा के गर्ने भनेर निश्चित हुनुहुन्न भने, यो लेख तपाइँको लागि हो। तपाइँ बिभिन्न विकल्पहरूको बारेमा सिक्नुहुनेछ जुन उपलब्ध हुन्छ जब तपाइँ अनुसन्धान कागजातहरू आदेश दिनुहुन्छ। यो एक शर्मको कुरा हुनेछ यदि तपाईलाई एक स्रोतबाट कागज अर्डर गर्न मात्र बाध्य पारियो कि त्यहाँ धेरै राम्रो विकल्पहरू छन् जुन तपाईलाई अझ राम्रो विकल्प प्रस्ताव गर्न सक्छ। वास्तवमा यो वास्तवमै धेरै राम्रो विचार हो!
त्यसोभए, किन तपाईंले सेवा मार्फत अनुसन्धान कागजको लागि भुक्तान गर्नुपर्छ? ठिक छ, यहाँ केहि कारणहरू छन् जुन तपाईंले गर्नुपर्दछ। पहिले, कसरी तपाइँ आफैंलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ बताउनुहोस्। जब तपाईं सेवा मार्फत कागज अर्डर गर्नुहुन्छ, तपाईंसँग एक परियोजनाको साथ काम गर्ने सबै सुविधाहरू हुन्छन्। थप रूपमा, तपाई तयारीको शर्तमा ठूलो समय, पैसा र प्रयास बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
वास्तवमा तपाईको शोध कागजातहरूका लागि अनलाइन भुक्तान गर्नु खराब विचार होइन। यो काम धेरै समय खपत हुने छ, त्यसैले तपाईं आफ्नो कागज लेख्न लेखकलाई भाँडामा लिन निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले नै उल्लेख गरिए झैं तपाईले आफ्नो अनुसन्धान गर्नु पर्छ, र त्यसैले तपाईले अरु धेरै कुराहरु गर्नु पर्छ वास्तविक लेखन सुरु हुनुभन्दा अघि (जस्तै राम्रो प्रकाशक खोज्नुहोस्)।
अब, यसको मतलब यो होइन कि तपाइँ अनुसन्धान गर्न आवश्यक बिर्सनु पर्छ र तपाइँको अनुसन्धान कागजातहरू अर्डर गर्नुहोस्। तपाईंको पैसा र समय बचत गर्ने उत्तम तरिका भनेको सबै कम्पनीहरूको सूची बनाउनु हो जुन सेवाहरूको यी प्रकारहरू प्रदान गर्दै छन्, उनीहरूको मूल्यहरूको बारेमा सोध्नुहोस्, र उनीहरूसँग तुलना गर्नुहोस्।
जब तपाईं कम्पनीबाट कागज अर्डर गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई अर्डर फारम दिइनेछ जुन पुस्तकको बारेमा सबै जानकारी समावेश गर्दछ। तपाईंले कागजको लेखकको नाम र ईमेल ठेगाना, र मिति तपाईंलाई कागजातहरू पठाउन चाहानुहुन्छ पनि प्रदान गर्नुपर्नेछ। तपाईंले कागजमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ, जुन तपाईंलाई ईमेल गरीन्छ एक पटक भुक्तान निश्चित भएपछि।
एक पटक तपाईंसँग अर्डर फाराम छ, तपाईं भुक्तान पठाउन अन्तिम मिति सम्म प्रतीक्षा गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यहाँ जहिले पनि पालो अवधि हुन्छ, र कहिलेकाँहि दुई दिन।
अवश्य पनि, कहिलेकाँही तपाइँसँग दिनको लागि अर्डर फारम छैन। त्यो अवस्थामा, तपाईंको कागज तपाईंलाई मेल पठाउनु पर्छ तपाईंले भुक्तानी पेश गरेपछि।
अन्तमा, तपाई सँधै यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाई राम्रो ठाउँ बाट अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ। यी धेरै जसो कम्पनीहरूको गुणवत्ता, सस्तो र उच्च-गुणवत्ता सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठा छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं तिनीहरूबाट अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ।
एक पटक तपाईको कागज आइपुगे पछि तपाईले यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नु पर्छ। यदि केहि अस्पष्ट देखिन्छ भने, तपाईंले तुरून्त कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ।
राम्रो काम भनेको कम्पनीसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्नु हो, र उनीहरूलाई कागजातहरू पढ्न भनि भन्नु भएको थियो जुन तपाईं अर्डर गर्नुभयो। यदि तपाईं केहि बारे निश्चित हुनुहुन्न भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले उनीहरूसँग पहिले कुरा गर्नुभयो।
तपाईले कागजको आफ्नै प्रतिलिपि पठाउनु पर्छ। र, जब तपाईंले त्यो गर्नुभयो, तपाईंले प्रकाशकहरूलाई पठाउनु अघि प्रमाणहरू प्रिन्ट गर्नुपर्नेछ।
यो एक सरल तरीका मात्र हो कि तपाईलाई सचेत हुन आवश्यक छ कि कसरी अनुसन्धान कागजातहरूको लागि भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ। जब उनीहरू प्रस्ताव राखिन्छन्।
केहि कम्पनीहरूले विभिन्न कागजातहरूमा आफ्नै कागजहरू प्रस्ताव गर्छन्। यदि तपाइँ तिनीहरूको कार्यक्रम मार्फत एक भन्दा बढि कागजहरूको लागि भुक्तान गर्नुहुन्छ भने केहीले तपाईंलाई छुटको मूल्य प्रस्ताव गर्नेछन्।
यसको मतलव तपाईले ती मध्ये एउटा कागजात किन्नुपर्नेछ, र त्यसपछि तपाईले चाहानु भएको अन्य छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी तपाईंले त्यसो गरेपछि, तपाईं बाँकी कागजातहरूमा उनीहरूले अर्डर गरेकोमा छुट पाउनुहुनेछ।
यस विकल्पको बारेमा राम्रो कुरा भनेको तपाईसँग कागजको यति धेरै प्रतिलिपिहरू हुनसक्छन् जस्तो तपाईलाई चाहिन्छ। बिभिन्न मुल्यहरूमा, र तपाईं समयको फरक मात्रामा तिनीहरूलाई राख्न सक्षम हुनुहुनेछ।